နယ်သာလန်နိုင်ငံ NLZIET FOR စီမံခန့်ခွဲ OTT ဝန်ဆောင်မှုများပေးရန်အနီရောင်ပျားမီဒီယာ - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့် Beat အသုံးပြုပုံ NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Michael Cioni သည် Frame.io နှင့် ပူးပေါင်း၍ Global SVP ၏တီထွင်မှုဖြစ်သည်
VidOvation နှင့် V-Nova တို့သည်မဟာဗျူဟာမိတ်ဖက်အဖြစ်ကြေငြာခဲ့သည်
Cobalt Digital သည် Ciro Noronha အားအင်ဂျင်နီယာအလုပ်အမှုဆောင်ဒုတိယဥက္ကPresident္ဌအဖြစ်မြှင့်တင်ပေးသည်
NUGEN Audio သည် AES 2019 တွင် SigMod Software Update ကိုကြေငြာခဲ့သည်
Ariana Grande ၏ Sweetener World Tour အတွက်ဆန်းသစ်သောဗွီဒီယိုကိုဖျောက်ထားသည့်ဖြေရှင်းနည်းများ
NEP UK သည်စက်ဝိုင်းအားပေါ်ပေါက်စေ
တစ်မိုင်အကွာသို့သွားသောအခါတရုတ်နိုင်ငံရှိ Switch ၏ကျယ်ပြန့်သောကွန်ယက်ရောက်ရှိမှုက Hengshui Lake International Marathon ကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပရိသတ်များထံပို့ဆောင်ပေးသည်
Home » သတင်း » နယ်သာလန်နိုင်ငံ NLZIET FOR စီမံခန့်ခွဲ OTT ဝန်ဆောင်မှုများပေးရန်အနီရောင်ပျားမီဒီယာ
နယ်သာလန်နိုင်ငံ NLZIET FOR စီမံခန့်ခွဲ OTT ဝန်ဆောင်မှုများပေးရန်အနီရောင်ပျားမီဒီယာ
အနီရောင်ပျားမီဒီယာကိုအောင်မြင်စွာမေလ 2019 အတွက်ယူအီးအက်ဖ်အေချန်ပီယံလိဂ်၏တိုက်ရိုက်စီးနှင့်အတူအယူအဆတစ်ခုအထောက်အထားဖြည့်ပြီးနောက်, နယ်သာလန်အတွက်တိုက်ရိုက်ရုပ်သံ & ဗီဒီယို On-demand ပလက်ဖောင်း NLZIET များအတွက်စီမံ OTT န်ဆောင်မှုကိုကယ်နှုတ်သောကန်ထရိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပေးအပ်န်ဆောင်မှုများ transcoding, ထုပ်ပိုးများနှင့်တိုက်ရိုက်လိုင်းများ၏အရည်အသွေးမြင့်စီး၏ပေးပို့ပါဝင်သည်နှင့်ဖမ်း-up, အကြောင်းအရာ NLZIET ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ။ NLZIET, နယ်သာလန်တွင်အကြီးဆုံးစီးပွားဖြစ်ထုတ်လွှင့်နှစ်ခုဘန်ဝစ်နှင့် Talpa ကွန်ယက်နှင့်အတူ ပူးပေါင်း. ဒတျချြအများပြည်သူထုတ်လွှင့် NPO အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး 22 linear လိုင်းများအနေဖြင့်စုပေါင်းအကြောင်းအရာနဲ့လစဉ်ကြေးပေးသွင်းဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါသက်သေ-of concept ကိုပါဝင်ပတ်သက်စမ်းသပ်ခြင်းများနှင့်တိုက်ရိုက်ပို့ဆောင်အတွက်သရုပ်ပြစွမ်းရည်များနှင့်ချိတ်ဆက်ပစ္စည်းများမှအကြောင်းအရာများ-up, ဖမ်းအဖြစ်တစ်ပြိုင်နက်အသုံးပြုသူများအမြင့်မားနံပါတ်များကိုကိုင်တွယ်ရန်စွမ်းရည်။ အဆိုပါအောင်မြင်သောစမ်းသပ်မှုနီပျားမီဒီယာမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များနှင့်စမတ်တီဗီရဲ့အပါအဝင်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုရောနှောအပေါ်အကြောင်းအရာကယ်နှုတ်တော်မူ၏ရှိရာဧပြီလနှင့်မေလတွင် 2019 အတွက်ယူအီးအက်ဖ်အေချန်ပီယံလိဂ်၏တိုက်ရိုက်စီး, ပါဝင်သည်။
ရှေ့ဆက် Going, နီပျားမီဒီယာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအကြောင်းအရာနှင့် 10 ရက်ပေါင်းဖမ်း-Up နှင့်အတူ 000 linear လိုင်းများကိုကယ်နှုတ်သောအကြောင်းအရာရှာမှီးခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏စီမံ OTT န်ဆောင်မှုများအဘို့, 227linear သတင်းရင်းမြစ်ကျော်ဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူ, သူတို့ရဲ့ Channel ကို Store က solution ကို အသုံးပြု. လိမ့်မည်။
Niels Baas, မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ NLZIET says: "နီပျားမီဒီယာဆန်းသစ်တီထွင်မှု, အပေါ်တွင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဝန်ဆောင်မှုမော်ဒယ် service provider ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုများအတွက်အဆုံးအဖြတ်ပါပြီတဲ့ပြည့်စုံ OTT ဖြေရှင်းချက်ပေးထားပါတယ်။ ဒီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်အတူ NLZIET နှင့်အနီရောင်ပျားမီဒီယာတို့ပူးတွဲကျနော်တို့အနေနဲ့တိုးတက်လာသောကြည့်အတွေ့အကြုံကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ subscriber များအားပူဇော်နိုင်သည့်နှင့်အတူတစ်ဦး, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၏အရွယ်မှာနှင့်ဆန်းသစ် OTT ပလက်ဖောင်းပို့နေကြတယ်။ "
"ကျနော်တို့က NLZIET အတူဒတ်ခ်ျပရိသတ်များမှတစ်ဦးကိုနောက်မျိုးဆက်ကို streaming service ကိုကယ်နှုတ်တော်မူခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့နိုင်တော့မည်ရန်အလွန်ဂုဏ်ယူကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်အရည်အသွေးမြင့်စီးနှင့်စျေးကွက်အပေါ်အကောင်းဆုံးတိုက်ရိုက် OTT ဝန်ဆောင်မှုနှင့်တကွ, အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှကြည့်ရှုအတွေ့အကြုံကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်ပါသည် "Josbert ဗန် Rooijen, Market ကဧရိယာ Benelux, ဗဟို & အရှေ့ဥရောပအကြီးအကဲ, နီပျားမီဒီယာကပြောပါတယ်။
အနီရောင်ပျားမီဒီယာနှင့် NLZIET volumes ကိုချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးကိုတိုးမြှင့်, အတူတကွ streaming ဝန်ဆောင်မှုကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ ဧဒုံပျားမီဒီယာများ၏အပေါ်တွင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုနှင့်အတူပေါင်းစပ်ဒီနွေဦးအီးယူအတွက်ရုပ်သိမ်းခံရပထဝီပိတ်ဆို့ခြင်း, OTT န်ဆောင်မှုများစီမံမှုနှင့်အတူ NLZIET ဒတျချြနယ်နိမိတ်ကျော်လွန်ပြီးသူတို့၏ကြည့်ရှုမှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အနိမ့်အောင်းနေချိန်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ OTT ၎င်းတို့၏မကြာသေးခင်ကတိုးတက်မှုတွေကအောက်ပါ, နီပျားမီဒီယာလည်းဖြစ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးမြန်နှုန်းမှာမျက်နှာပြင်ကင်မရာကထဲကနေ NLZIET တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအကြောင်းအရာပူဇော်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
"အနီရောင်ပျားမီဒီယာ, အ OTT အာကာသအတွင်းတီထွင်ဆန်းသစ်အတွက်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအားထုတ်မှုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ့်မြင့်မားတဲ့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၏အရွယ်မှာနှင့်အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲန်ဆောင်မှုပလက်ဖောင်းဖန်တီး", ဒါဝိဒ်သည် Travis, ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Portfolio အရာရှိ, ဗီဒီယိုန်ဆောင်မှုများ, ဧဒုံပျားမီဒီယာကပြောပါတယ်။ "ကျနော်တို့ကအခုချိန်မှာအားလုံးအရွယ်အစားနှင့်ရည်မှန်းချက်၏ OTT လုပ်ငန်းများများအတွက်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးန်ဆောင်မှုများပေးရန်အစွမ်းရည်ရှိသည်။ "
အနီရောင်ပျားမီဒီယာထက်ပို 2500 မီဒီယာဝန်ဆောင်မှုနှင့်ထုတ်လွှင့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တစ်ဦးဝန်ထမ်းတစ်ဦးဦးဆောင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမီဒီယာန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ လန်ဒန်, ဗြိတိန်တွင်ဦးခေါင်းရုံးနှင့်အတူအနီရောင်ပျားမီဒီယာကမ္ဘာတဝှမ်း 11 အဓိကအချက်အချာကနေန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလူအပေါင်းတို့တိုက်ကြီးပေါ်မှာလူတွေသန်းပေါင်းများစွာရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များ, ကိုပြင်ဆင်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်အနီပျားမီဒီယာန်ထမ်းများကထုတ်လွှင့်ကြည့်ပါ။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း, စီးပွားရေး4တီဗီလိုင်းများကိုကျော်ဘို့ 60 + ဘာသာစကားများထက် သာ. 500 ပရိုဂရမ်းမင်း၏သန်းနာရီကယ်တင်တတ်၏။ အနီရောင်ပျားမီဒီယာရဲ့ OTT န်ဆောင်မှု 233 သန်းစာရင်းသွင်းသူပေးထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် 119 ကို standalone ချန်နယ်များအတွက် 1.7 လိုင်းများ၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ transcoding ပါဝင်သည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏အကြောင်းအရာရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအစုစုကိုပိုပြီးသန်း 10 ထက်ရုပ်ရှင်နှင့်အစီအစဉ်ကိုခေါင်းစဉ်, 25 ဘာသာစကားများကျော်ဖုံးအုပ်နှင့်ရိုးရာတီဗီ, VOD နှင့် SVOD ဖြတ်ပြီးမရရှိနိုင်သမျှသောပရိုဂရမ်းမင်း၏ 90 ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကျော်နှင့်အတူပုံတစ်ပုံကိုဒေတာဘေ့စပါဝင်သည်အထိချဲ့ကာ။ အနီရောင်ပျားမီဒီယာကိုလည်းနှစ်စဉ်စာတန်းထိုး၏ 200,000 နာရီကျော်ထောက်ပံ့ - တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဖြစ်သော၏ 70,000 နာရီထက် ပို. ။ အနီရောင်ပျားမီဒီယာမတူကွဲပြားမှုလက်ခံနှင့်တစ်ခုလုံးကိုအဖွဲ့အစည်းကတစ်လျှောက်လုံးတစ်ဦးအားလုံးပါဝင်နိုင်အလုပ်ခွင်အတွက်ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အာရုံနှင့်အတူတန်းတူအခွင့်အလမ်းအလုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ www.redbeemedia.com/nab-2019
NLZIET ဒတျချြပြည်သူ့အသံလွှင့်ယူနီယံ (NPO), ဘန်ဝစ် Nederland နှင့် Talpa တီဗီများအကြားတစ်ဦးကိုပူးတွဲစစ်ဆင်ရေးဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ streaming များရုပ်သံ-service ကို NLZIET နှင့်အတူကြည့်ရှုတစ်နေရာတည်းတွင်သုံးခုအကြီးဆုံးဒတျချြထုတ်လွှင့်ကနေအကြောင်းအရာတစ်ခုကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဝဘ်များအတွက် apps များကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်, မိုဘိုင်း, Apple TV, Android တီဗွီ, Play Station4နှင့်စမတ်တီဗီထုတ်လွှင့်များ၏ content တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သည်အများအားဖြင့်ကြော်ငြာအခမဲ့, အရည်အသွေးမြင့်မား၌၎င်း, On-demand-Up ကိုဖမ်း။ အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုကိုလစဉ်ကြေးပေးသွင်းမှတဆင့်လက်လှမ်းဖြစ်ပါတယ်။
အနီရောင်ပျားမီဒီယာအာဏာနှင့်ကိန်းရုပ်ရှင်ပွဲတော် 2019 အတွင်းမှာတူးမြောင်း + အတွက်အဝေးမှ PRODUCTION ထောက်ခံပါသည် - ဇူလိုင်လ 31, 2019
အနီရောင်ပျားမီဒီယာ HILVERSUM, နယ်သာလန် NEW အနီရောင် Lab facility အစီအစဉ်စတင်ခဲ့သော - ဇူလိုင်လ 10, 2019
ဆွီဒင် NENDA နဲ့အတူအနီရောင်ပျားမီဒီယာ Partners - စီမံခန့်ခွဲ OTT မှတဆင့်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းဟိုတယ်အခန်းတွင်းနောက်မျိုးဆက်တယ်လီအတွေ့အကြုံ POWERING - ဇူလိုင်လ 9, 2019
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ အထောက်အပံ့ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor NLZIET OTT အနီရောင်ပျားမီဒီယာ လှံ & Arrows တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2019-05-23
ယခင်: Post ကိုန်ဆောင်မှုများအဘို့ဆုချီးမြှင့်ပြိုင်ပွဲစစ်သားစုဆောင်းရေးအလင်းသံ
နောက်တစ်ခု: မှတ်တမ်းတင်ခြင်းအင်ဂျင်နီယာချုပ် - ခြေရာခံခြင်းအင်ဂျင်နီယာချုပ် - ဂီတအင်ဂျင်နီယာချုပ် - အသံ Editor ကို